Kogeelay: Quick Tip#3 : Browsers Speed Test [explain]
Quick Tip#3 : Browsers Speed Test [explain]
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်က ကျွန်တော့် ကွန်ပြူတာထဲမှာ ရှိတဲ့ Browser တွေအားလုံးကို Speed Test လုပ်ကြည့် ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Result တွေကို ကြည့်ပီး ဘယ် Browser ကဘာအတွက်ကောင်းလဲဆိုတာ အောက်မှာဓါတ်ပုံနဲ့ တစ်ကွ ရှင်းပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်မှာမြင်ရတာတော့ Speedtest.net မှာ browser အမျိုးမျိုးနဲ့ Test လုပ်ပြီးရထားတဲ့ ရလဒ်တွေရဲ့ အချက်အ လက်တွေပါ။ Google Chrome ကိုစမ်းတာ ping နဲ့ download speed မှာ အခြား browser ထက်မြန်တာတွေ ့ရပါတယ်။ Ping မြန်ရင်တော့ online flash game နဲ့ အခြားသော flash website များကိုအသုံးပြုရတာ မြန်ဆန်ပါတယ်။ ဒေါင်းလော့ လုပ် တဲ့နေရာမှာလည်း အခြား browser တွေထပ် အမြန်ဆုံးဆိုတာတွေ ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖိုင်တွေကို ဒေါင်းလော့လုပ် ဖို့ဆိုရင် Chrome ကအ ကောင်းဆုံးဖြစ်မှာ သိရှိပါတယ်။ Facebook နှင့် အခြားသော website များမှာရှိတဲ့ ဂိမ်းတွကို လည်း ဆော့တဲ့နေရာမှာလည်း မြန်ဆန်တာတွေ ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Browser နောက်တစ်ခုကို ကြည့်ရအောင်ဗျ။
Firefox ထဲမှာဆိုရင် Google Chrome ထပ် Upload Speed နဲ့ Pings များတာကိုတွေ ့ရပါတယ်။ Upload Speed များ တယ်ဆိုတော့ ဖိုင်ကြီးတွေကို host တဲ့နေရာမှာ Chrome ထပ်လွယ်ကူစေမှာပါ။ Ping အတွက်ကကျတော့ : Pings များလေလေ နှေးလေလေပဲ : ဆိုတော့ Chrome က Websites/Servers Connectivity နေရာမှာသာတာပေါ့ဗျာ။ Final Score ကိုအဆုံးမဖြတ်ခင် i.e. ကိုလေ့လာရအောင်ဗျ။
i.e. ကို အပေါ်က browser နှစ်ခုနဲ့ ပြန်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ Pings နဲ့ Upload Speed မှာသာနေတာမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ခုနက ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ ဆိုက်ကြီးတဲ့ ဖိုင်တွေကို Website မှာတင်မယ်ဆိုရင် Chrome နဲ့ Firefox ထပ် မြန်မြန် ဆန်ဆန်ရှိ မဲ့ Browser ဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်း ဂိမ်းဆော့မဲ့ နေရာမှာလည်း မြန်မဲ့ Browser လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးနိဂုန်း ချုပ်တဲ့ အနေနဲ့ ဘယ် Browser က သင့်အတွက်ကောင်း စေမယ်ဆိုတာ Rate အနေနဲ့ ပြန်ရေးထားပေး လိုက်ပါတယ်။
Google Chrome Speed: Fast
Firefox Speed: Medium
i.e. Speed: Average
ဒီ Result တွေက ကျွန်တော် Test လို့ဖြစ်လာတဲ့ ရလဒ်ပါ။ တစ်ချို ့ကလဲ သဘောတူချင်တူမှာပါ၊ တစ်ချို ့ကလည်း ကျွန်တော့်နဲ့ တူချင်တူနေမှာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ပါသာကိုယ် စမ်းကြည့်ပြီး ဆုံဖြတ်တာကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်က အားလုံး Browser အကြောင်းတွေသိရအောင်လို့ ပိုစ့်အနေနဲ့ ရေးပေးလိုက်ပါ။ အားလုံးအဆင် ပြေကြပါစေ။
ေျခရာေလးအတုိင္းလာေရာက္လည္သြားျပီးမတတ္ထားတာေလးေတြသင္ယူသြားတယ္ေနာ္ ေက်းဇူးတင္တယ္ေနာ္ က်ေနာ့္ဆုိဒ္ေလးကုိလာလည္သြားတဲ့အတြက္ ခုလုိသတင္းဆုိဒ္ၾကီးတစ္လုိကုိသိခြင့္ရတဲ့အတြက္ေရာပဲေနာ္...ေနာက္လဲမၾကာမၾကာလာလည္မယ္ေနာ္...